အိန်ဒိယ PUBG Mobile အသငျးကို ချေါယူလိုကျတဲ့ Fnatic – Gaming Noodle
အိန်ဒိယ PUBG Mobile အသငျးကို ချေါယူလိုကျတဲ့ Fnatic
UK အခွစေိုကျ ကမ်ဘာကြျော Esports အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ “Fnatic” ဟာ အောကျတိုဘာလ (၁၉) ရကျနကေ့ PUBG Mobile Esports အသငျးကို စတငျတညျထောငျလိုကျပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ PUBG Mobile ဟာ Fnatic ရဲ့ ၁၁ ခုမွောကျ ဂိမျးအမြိုးအစားဖွဈပွီး ရှကေ့ တညျထောငျထားတဲ့ အသငျးတှထေဲမှာတော့ Apex Legends, Clash Royale, CSGO, Dota2, FIFA, Fortnite, LOL, Rainbow Six, Rules of Survival နဲ့ Street Fighter အသငျးတို့ ပါဝငျပါတယျ။
PUBG Mobile ဟာ အာရှတိုကျမှာ လတျတလော ရပေနျးစားနတေဲ့ မိုဘိုငျးဂိမျးအမြိုးအစားတဈခု ဖွဈနတောနဲ့ အညီ Fnatic ဟာလညျး သူတို့နဲ့ အစိမျးသကျသကျဖွဈနတေဲ့ အိန်ဒိယ ဈေးကှကျထဲကို ဝငျရောကျပွီး အိန်ဒိယ အသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ “Team XSpark” ကို ချေါယူလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ XSpark အသငျးဟာ ၂၀၁၉ သွဂုတျလကမှ စတငျဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အသငျးတဈသငျးဖွဈပွီး တောငျအာရှ ဒသေရဲ့ အကောငျးဆုံး အသငျးတဈသငျးအဖွဈလညျး ရပျတညျနပေါတယျ။
Fnatic PUBG Mobile ရဲ့ လူစာရငျးကတော့
1. Tanmay Singh “Sc0utOP”
2. Mohammad Owais Lakhani “Owais”
3. Harpreet Singh Janjuha “Ronan”
4. Paritosh Sharma “Paritosh”
5. Ujwal Chaudhari “InYoDreams”
ကစားသမားတှဟော ဝါရငျ့ PUBG Mobile ကစားသမားတှေ ဖွဈကွပွီး Owais နဲ့ Ronak တို့ဟာ PMCO Spring Split Global Finals အဆငျ့ (၁၂) ရ Team Soul မှာ ပါဝငျခဲ့ပွီး Sc0utOP ဟာလညျး PMCO Spring Split prelims ပှဲမှာ အဆငျ့ (၁၂) ရ Team IND မှာ ပါဝငျကစားခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ Team Soul ရော Team IND ဟာလညျး PMCO India Finals Spring Split မှာ ပထမနဲ့ ဒုတိယ အသီးသီး ရရှိခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှူတှေ ရှိနပေါတယျ။
Team XSpark (ယခု Fantic) ဟာ လကျရှိမှာလညျး PMCO Fall Split South Asia ပှဲမှာလညျး ပါဝငျယှဉျပွိုငျလြှကျရှိပွီး အုပျစု အဆငျ့ (၃) မှာ ရပျတညျလြှကျ ရှိနပေါတယျ။ မလေးရှားမှာ ကငျြးပမယျ့ PMCO Fall Split Global Final မှာလညျး South Asia ဒသေ ကိုယျစားပွုအသငျးအဖွဈ ဝငျရောကျခှငျ့ ရရှိဖို့လညျး ရပေနျးစားနပေါတယျ။ သူတို့ရဲ့ လကျစှမျးကိုတော့ လာမယျ့ PMCO South Asia Fall Split ဆီမီးဖိုငျနယျ ပှဲမှာ စောငျ့ကွညျ့ခှငျ့ ရရှိတော့မှာပါ။
Fnatic ဟာလညျး အိန်ဒိယ ဈေးကှကျကို ဝငျရောကျလာပွီး မကွာခငျမှာလညျး Gaming House တဈခုထားရှိကာ Fnatic ရဲ့ အမှတျတံဆိပျကို မွှငျ့တငျဖို့လညျး အစီအစဉျတှရှေိကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ Fnatic ဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အိမျနီးခငျြး နိုငျငံတှဖွေဈတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံ (Rules of Survival)ရော အိန်ဒိယ နိုငျငံ (PUBG Mobile) မှာပါမက မလေးရှားနိုငျငံ (Dota2) မှာပါ Esports အသငျးတှေ တညျထောငျထားပွီး အာရှဈေးကှကျကို အရှိနျအဟုနျနဲ့ ထိုးဖောကျလြှကျ ရှိနတောမလို့ အာရှ Esports လောကရဲ့ အနာဂတျကတော့ အတကျဖကျကိုသာ ဦးတညျနပေါတော့တယျ။
Reference : Dotesports, Wikipedia
India, we're coming! 🖤🧡🇮🇳In 2020, we will be the world's best PUBG MOBILE team. 🇮🇳🔜🌏🏆Next year is your year, India; we're Black and Orange!instagram.com/p/B3woRftBCWe
Posted by Fnatic on Friday, 18 October 2019
အိန္ဒိယ PUBG Mobile အသင်းကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ Fnatic
UK အခြေစိုက် ကမ္ဘာကျော် Esports အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Fnatic” ဟာ အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့က PUBG Mobile Esports အသင်းကို စတင်တည်ထောင်လိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ PUBG Mobile ဟာ Fnatic ရဲ့ ၁၁ ခုမြောက် ဂိမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ရှေ့က တည်ထောင်ထားတဲ့ အသင်းတွေထဲမှာတော့ Apex Legends, Clash Royale, CSGO, Dota2, FIFA, Fortnite, LOL, Rainbow Six, Rules of Survival နဲ့ Street Fighter အသင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
PUBG Mobile ဟာ အာရှတိုက်မှာ လတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်နေတာနဲ့ အညီ Fnatic ဟာလည်း သူတို့နဲ့ အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ အိန္ဒိယ ဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး အိန္ဒိယ အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ “Team XSpark” ကို ခေါ်ယူလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ XSpark အသင်းဟာ ၂၀၁၉ သြဂုတ်လကမှ စတင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး တောင်အာရှ ဒေသရဲ့ အကောင်းဆုံး အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်လည်း ရပ်တည်နေပါတယ်။
Fnatic PUBG Mobile ရဲ့ လူစာရင်းကတော့
ကစားသမားတွေဟာ ဝါရင့် PUBG Mobile ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြပြီး Owais နဲ့ Ronak တို့ဟာ PMCO Spring Split Global Finals အဆင့် (၁၂) ရ Team Soul မှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး Sc0utOP ဟာလည်း PMCO Spring Split prelims ပွဲမှာ အဆင့် (၁၂) ရ Team IND မှာ ပါဝင်ကစားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Team Soul ရော Team IND ဟာလည်း PMCO India Finals Spring Split မှာ ပထမနဲ့ ဒုတိယ အသီးသီး ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှူတွေ ရှိနေပါတယ်။
Team XSpark (ယခု Fantic) ဟာ လက်ရှိမှာလည်း PMCO Fall Split South Asia ပွဲမှာလည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လျှက်ရှိပြီး အုပ်စု အဆင့် (၃) မှာ ရပ်တည်လျှက် ရှိနေပါတယ်။ မလေးရှားမှာ ကျင်းပမယ့် PMCO Fall Split Global Final မှာလည်း South Asia ဒေသ ကိုယ်စားပြုအသင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိဖို့လည်း ရေပန်းစားနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လက်စွမ်းကိုတော့ လာမယ့် PMCO South Asia Fall Split ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲမှာ စောင့်ကြည့်ခွင့် ရရှိတော့မှာပါ။
Fnatic ဟာလည်း အိန္ဒိယ ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက်လာပြီး မကြာခင်မှာလည်း Gaming House တစ်ခုထားရှိကာ Fnatic ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကို မြှင့်တင်ဖို့လည်း အစီအစဉ်တွေရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ Fnatic ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ (Rules of Survival)ရော အိန္ဒိယ နိုင်ငံ (PUBG Mobile) မှာပါမက မလေးရှားနိုင်ငံ (Dota2) မှာပါ Esports အသင်းတွေ တည်ထောင်ထားပြီး အာရှဈေးကွက်ကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ထိုးဖောက်လျှက် ရှိနေတာမလို့ အာရှ Esports လောကရဲ့ အနာဂတ်ကတော့ အတက်ဖက်ကိုသာ ဦးတည်နေပါတော့တယ်။